သင်္ကြန်နားနီးချိန် မန်းကျောက်စိမ်းဈေးကွက် တရုတ်ဝယ်လက်နှင့် ပြည်တွင်းကုန်သည်များ များပြာ?? - Yangon Media Group
သင်္ကြန်နားနီးချိန်တွင် မန်းကျောက်စိမ်းဈေးကွက် ၌ တရုတ်ဝယ်လက်နှင့် ပြည်တွင်း ကုန်သည်များ အများအပြားရှိနေ ပြီး အရည်အသွေးကောင်းအပွင့်များ ကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်ယူလျက်ရှိ သောကြောင့် ပိုမိုအရောင်းသွက်နေ ကြောင်း ကုန်သည်များနှင့်ပွဲစား များထံမှ သိရသည်။
”တရုတ်ဝယ်လက် တော်တော်များများကတော့ အရည်အသွေး ကောင်းတဲ့အပွင့်တွေကို အဓိကထားဝယ်ယူနေကြပေမယ့် အပွင့်ဝိုင်းမှာတော့ တန်ဖိုးနည်းကျောက် စိမ်းတွေ ဝင်ရောက်မှုနည်းတဲ့အတွက် တန်ဖိုးမြင့်အပွင့်တွေပဲ အဝယ်လိုက်နေတယ်။ အရည်အသွေး ကောင်းတဲ့အပွင့်တွေဆိုရင် ဈေးမနှိမ်ဘဲ ဝယ်ယူမှုတွေရှိနေသလို အပြင်ကုမ္ပဏီတွေအထိသွားပြီး တော့ အပွင့်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ရှာ ဖွေဝယ်ယူနေကြပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ဈေးကွက်အနေအထားကတော့ မနှစ်ကထက်တောင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရှိရ ပြီး ကုန်ကြမ်းတွေလည်း ထပ်မံဝင် ရောက်ဖို့ရှိတာကြောင့် သင်္ကြန်အ ပြီးမှာလည်း ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက် လက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့များတယ်” ဟု မဟာအောင်မြေကျောက်မျက် ရတနာရောင်းဝယ်ရေးစခန်းမှ ကျောက်စိမ်းကုန်သည် ဦးသိန်းဇော် ကပြောကြားသည်
ကျောက်မျက်စခန်းအတွင်းရှိ အပွင့်ဝိုင်း၊ လက်ကောက်ဝိုင်းတို့အပြင် လွှာချပ်ဝိုင်း၊ အတစ်ဝိုင်း၊ ပျံကျ မီးထိုးဝိုင်း၊ ဂွင်ဝိုင်းနှင့် မိုးကုတ်နီပြာဝိုင်းတို့တွင် ရောင်းဝယ်သူများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိရာ ဈေးကွက်အတွင်း၌ ကုန်ကြမ်းလွှာချပ်ပေါများစွာရှိနေသောကြောင့် တစ်နိုင်တစ် ပိုင်ဝယ်ရောင်းသမားများမှာ လက် ကောက်များအဖြစ် ပြုလုပ်ရောင်းချ ၍ ကျောက်စိမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ဖြတ်ခုံ၊ သွေးခုံ၊ ဖောက်ခုံလုပ်ငန်းများ တွင် အပ်ထည်များလှိုင်လှိုင်ရရှိနေ ပြီး အလုပ်သမားများအတွက် နေ့စဉ်အလုပ်ပေးနိုင်နေသည်။ သင်္ကြန်ပြီးချိန်တွင် ကျောက် မျက်ဈေးကွက်သို့ ဖားကန့်ဒေသဘက် မှ ကုန်ကြမ်းများလည်း ထပ်မံဝင် ရောက်လာမည်ဖြစ်သဖြင့် မန္တလေး ကျောက်စိမ်းဈေးကွက်ပိုမို ကောင်း မွန်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ကုန်သည် များထံမှသိရသည်။
ရိဒ်ရေကန်အတွင်း ရှင်သန်နေသည့် ငါးမျိုးစိတ်များကို ထိန်းသိမ်းနေပြီး လိုအပ်သည့် ငါးမျိုးစိ?
မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယားလက်နက် အလျင်ဖျက်သိမ်းရမည်ဟု အမေရိကန် ဆို